प्रचण्ड–नेपाल समूहको बुटवल सभामा उर्लियो जनसागर – रुपान्तर
मुख्य पृष्ठसमाचारप्रचण्ड–नेपाल समूहको बुटवल सभामा उर्लियो जनसागर
प्रचण्ड–नेपाल समूहको बुटवल सभामा उर्लियो जनसागर
नेकपा प्रचण्ड-माधव पक्षले रुपन्देहीको बुटवलमा शक्ति प्रदर्शन गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको विरोधमा प्रचण्ड–नेपाल समूहले बिहीबार लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय विरोध प्रदर्शन र सभा गरेर आफ्नो शक्ति देखाएको हो । कार्यक्रममा अध्यक्षद्धय प्रचण्ड–नेपालले सम्बोधन गरेका छन् । सभाअघि बुटवलका तीन ठाउँबाट र्याली निकालिएको थियो ।
विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै पूर्व माओवादी नेताहरूले सरकारमा सहभागी मन्त्रीको चर्को विरोध गरेका हुन् । स्थायी कमिटी सदस्य चक्रपाणि खनालले सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई अनुहार चिन्ने गरी मात्र खरानी घस्न सुझाव दिएए । ‘अहिले मन्त्री खान जाने बेला हो ? यति धेरै खरानी घस्ने ? ऐनमा हेर्दा चिन्ने गरी मात्र घस, ताकि तिमीहरूको इतिहास हामीले बताइदिनुपर्नेछ,’ खनालले भने, ‘हिजो हामी जनसेनालाई दुत्कार्नेले आज कालीबहादुर चाहिने, काखी च्याप्दै हिँड्ने ?’
सभालाई सम्बोधन गर्दै केन्द्रीय सदस्य ओनसरी घर्तीले सरकारमा सहभागी भएर रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी र मणि थापाले प्रतिगमनको रक्षा गरेको आरोप लगाइन् । ‘विचार दृष्टिकोण छाडी पद प्रतिष्ठाको पछाडि लाग्नुभयो, तपाईंहरू गद्दार भएमा क्रान्तिकारीले प्रतिकार गर्नेछन्,’ घर्तीले भनिन् ।
सभालाई नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल लगायतका नेताहरूले सम्बोधन गर्दैछन् ।